Ukunciphisa inani leepati ezingavumelekanga ezenziwa ezindlini bekusoloko kuyinto ephambili kuAirbnb. Sithatha amanyathelo ukuxhasa uhambo olukhuselekileyo nolunenkathalo. Le nto ithetha ukuba ukubhukisha okunezinto ezibonisa ukuba maninzi amathuba okuba kungenziwa ipati akuzukuvunyelwa.
Indlela esebenza ngayo: Iindwendwe ezinenani lezimvo eliphantsi azivumelekanga ukuba zibhukishe indawo yonke ngomzuzu wokugqibela.
Nangona isenokukuphazamisa le nto, zikhona izinto onokukhetha ukuzenza. Le miqathango ayisebenzi kwiihotele okanye kwigumbi lakho lokulala, ngoko usenokukhetha ukukhangela ezo ntlobo zezindlu.